Cabdiqadir Xuseen Cabdulahi [Gamadiid] oo ay Booliska Dalka Garmalku ku Raad Joogaan – Rasaasa News
May 8, 2010 [waa sida u qorane] oo ay Booliska Dalka Garmalku ku Raad Joogaan, Cabdiqadir Xuseen Cabdulahi
Cabdiqadir Xuseen Cabdulahi [waa sida sharciga ugu qorane] oo ahaa ninkii watay kooxdii fulisay fal-dambiyeedkii lagu dhaawacay Maxamed-Sahal Mursal Shiil, October 2009, oo qarka u saaran in uu qabto Booliska Jarmalku.
Cabdiqadir Gamadiid ayaa waxaa uu dalka Jarmalka daganaa muddo 30 sano ah, waxaana uu ka mid ahaa muddo dheer taageerayaasha ururka ONLF, kolkii dambase ka cabay ceel nijaas ah.
Gamaadiid, ayaa waxaa duufsaday Jwxo-shiil, ka dib kolkii ay is qabteen Dr. Maxamed Siraad Dolal, isaga oo uu Jwxo-shiil ka dhigtay taageere khaas ah. Gamaadiid oo aan waligii masuuliyad qaban ayey la cuslaatay masuuliyada danta leh ee uu Jwxo-shiil ku sheegay in uu u hayo Cabdiqadir kooxda.
Gamaadiid ayaa markii uu Jwxo-shiil u magacaabay jagadaas ka tagay shaqadiisii isla mar ahaantaasna dalaaqay afadiisii oo meel cidlo ah kaga dhaqaaqay iyada iyo caruurtii.
Waxaana uu kolkiiba ka mid noqday duqay danlaaweyaal ah oo ku guursaday gabadho yar oo masaakiin ah xerada qaxootiga ee loo yaqaan Buulo Absame oo ku taal magaalada Boosaaso.
Way adag tahay in ruux aan reer lahayn uu ku noolaado dalalka Yurub, hadaba si uu u soo gashado xaaska cusub wuxuu Gamaadiid iska dhiibay dalka Sweden oo uu muddo qaxooti ku ahaa.
Xaqdaradu waa guul darada ugu wayn, Gamaadiid oo fulinay amarka Jwxo-shiil, ayaa si aan munaasab ahayn koox uu wato ay si xun u dileen mayd ahaana uga tageen Mudane Maxamed-Sahal Mursal Shiil, oo xiligaas booqasho ku tagay dalka Sweden.
Gamaadiid, oo isagu xiligaas xero qaxooti kaga jiray dalka sweden ayaa iskaga cararay xeradii oo mudana ku dhuumaalaysta dalalka Denmark iyo Jarmalka.
Sida ay wararku sheegayaan, waxaa suurto gal ah in Gamaadiid mar dhaw boolisku gacanta ku dhigo, maxkamadna la soo taago, si loogu eedeeyo isaga iyo kooxdii la socotayba dilkii ay u gaysteen dhibane Maxamed Mursal Shiil, oo isagu wali la il-daran dhaawacyadii ay u gaysteen.
Arintan oo muddo dheer socotay, ayaa laga yaabaa in ay soo gabo gabowdo gu,ga, wixii ka soo kordhana waanu idinla soo socod siindoonaa.
Go,aamadii ka Soo Baxay Shirweynihii JXSG Uga Socda Degmada Cadaadle